कानूनमा के हो? | इनाम पुरस्कार
कानुन कानूनमा के हो?
यो कानूनको लागि सामान्य मार्गदर्शक हो र कानुनी सल्लाह छैन।
यो 2003 मा इङ्गल्याण्ड र वेल्स मा यौन अपराध कानून, र २०० in मा स्कटल्याण्डमा यौन अपराध अधिनियमले फौजदारी कानून अन्तर्गत मुद्दा चलाउनका लागि सहमति भनेको के हो भनेर सेट गर्‍यो।
सबै यौन पहिचानहरू समावेश गर्नको लागि कानूनले बलात्कारको परम्परागत परिभाषा विस्तार गरेको छ र "व्यक्ति (ए) उनको लिंगमा योनि [[तर अब]] वा अर्को व्यक्ति (बी) को मुख वा मुखमा घुसाउनको लागि अपराधको सिर्जना गर्दछ। या त जानबूझि वा बेकार बिना, त्यस व्यक्तिको सहमति बिना, र कुनै पनि उचित विश्वास बिना बी स्वीकार गर्दछ। "
स्काट्स्की कानूनको अधीनमा, "सहमतिले नि: शुल्क सम्झौता गर्दछ।"
"59। सब्सन (2) (ए) प्रदान गर्दछ कि कुनै नि: शुल्क सम्झौता छैन जहाँ आचरण एक समय मा पुग्छ जहाँ शराब योग्य छ, शराब वा कुनै अन्य पदार्थ को प्रभाव को कारण यो को लागी। यस सब्सनको प्रभावले यो व्यक्तिलाई कुनै पनि शराब भत्किने वा कुनै पनि विषाक्त पदार्थ लिन पछि यौन क्रियाकलापलाई सहमति दिन सक्दैन भनेर प्रदान गर्दैन। एक व्यक्तिले अल्कोहल (वा कुनै अन्य विषाक्त पदार्थ पदार्थ) खरिद गरेको हुन सक्छ, र पनि सहमतिको क्षमता गुमाए बिना, नराम्रो हुन सक्छ। तथापि, त्यो यौन क्रियाकलापमा भाग लिन के लागी क्षमताको गुमाउनुको कारण त्यो वा विषैले विषैले छ, कुनै पनि यौन क्रियाकलापमा पुग्छ, त्यसो भए पनि उजुरीको सहमति बिना। "
यो सन्दर्भमा के हो? नागरिक कानूनमा, उदाहरणका लागि अनुबंध गर्दा, सहमतिले एउटै कुराको सम्झौता गर्दछ। आपराधिक कानूनमा, यसको मतलब अनुमति को लागी केहि अधिक मन पर्छ। दुवै कानूनी क्षेत्रहरू प्रयोगका विचारहरू र शक्तिको दुरुपयोग समावेश गर्न खोज्छन्। 'सहमति' निर्धारण गर्ने यौन दुर्व्यवहारमा आपराधिक कानून को सबै भन्दा जटिल क्षेत्रहरु मध्ये एक हो। यसको लागि तीन मुख्य कारणहरू छन्।
पहिलो, यो जान्न गाह्रो छ कि अर्को व्यक्तिको दिमागमा के गरिरहेको छ। के सिग्नल छेउमा राख्नु भएको छ कि अहिले यौन संक्रमण ठीक छ वा पछिको समयमा सम्भोगको सम्भावनाको बारेमा मात्र निमन्त्रणा गर्न निमन्त्रणा छ? के यो एक सामाजिक आदर्श हो वा पुरुषहरूको लागि बुद्धिमानी 'उत्साहजनक' महिलाहरु लाई यौन सम्बन्धमा र महिलाहरुलाई अधिक आज्ञाकारी र अनुपालन गर्न को लागी अधिक प्रभावशाली हुन सकिन्छ? इन्टरनेट पोर्नोग्राफले निश्चित रूपमा यौन सम्बन्धको यो दृष्टिकोणलाई बढावा दिन्छ।
दोस्रो, यौन कृत्यहरू प्राय: साक्षी बिना नै गोप्य रूपमा गरिन्छ। यसको मतलब यदि त्यहाँ के भयो भनेर विवाद छ भने एउटा निर्णायकले मूल रूपमा एक व्यक्तिको कथा अर्को व्यक्तिमा छनौट गर्नुपर्दछ। उनीहरूले सामान्यतया घटनाको नेतृत्वमा के भएको थियो भन्ने कुराको प्रमाणहरू पत्ता लगाउनु पर्दछ जुन पार्टीहरूको दिमागमा के भएको थियो भनेर। उनीहरू कसरी पार्टीमा वा पबमा वा उनीहरूको अघिल्लो सम्बन्धको प्रकृतिमा व्यवहार गर्दै थिए, यदि कुनै छ भने? यदि सम्बन्ध एक्लै इन्टरनेटमा आयोजित गरिएको छ कि यो प्रमाणित गर्न गाह्रो हुन सक्छ।
तेस्रो, सतावटको कारण जुन यौन आक्रमणको परिणाम हुन सक्छ, उजुरीकर्ताहरूको पुनरावृत्ति र टिप्पणी वा विवरणहरू केही समय पछि बनाइएको हुन सक्छ। यसले अरूलाई थाहा छ कि वास्तवमा के भयो भनेर यो कठिन बनाउन सक्छ। स्थिति सबै र अधिक चुनौतीपूर्ण बनाइन्छ जब रक्सी वा ड्रग्स खपत भएका छन्।
किशोर-किशोरीहरूको लागि चुनौती भनेको मस्तिष्कको भावनात्मक अंशले उनीहरूलाई यौन रोमाञ्च, जोखिम लिने र प्रयोग गर्ने दिशामा गति दिइरहेको छ, जबकि जोखिमपूर्ण व्यवहारमा ब्रेक राख्न मस्तिष्कको तर्कसंगत भाग पूर्ण रूपमा विकसित भएको छैन। रक्सी वा ड्रग्स मिक्समा हुँदा यो सबै अझ गाह्रो हुन्छ। जहाँ सम्भव युवा पुरुषहरूले यौन सम्बन्धको लागि 'सक्रिय सहमति' खोज्नु पर्दछ र विश्वासको सहमतिमा होशियार हुनुपर्छ साथीले रक्सीले मात खाएको छ भने। बच्चाहरूलाई यो सिकाउन, यो हास्यास्पद देखाउनुहोस् कार्टून एक कप चियामा सहमति बारे। यो धेरै चलाख हो र बिन्दुलाई पार गर्न मद्दत गर्दछ।
अनुमोदित सहमति एक सहमतिको विवादास्पद रूप हो जुन एक व्यक्ति द्वारा स्पष्ट रूपमा प्रदान गरिएको छैन, तर एक व्यक्तिका कार्यहरु र एक विशेष परिस्थितिको तथ्याङ्क र केहि घटनाहरु (एक व्यक्तिको चुपचाप वा निष्क्रियता द्वारा) मा आधारित हुन्छ। विगतमा, विवाहित जोडी जो एकअर्कासित यौन सम्बन्ध राख्न "अनुमोदित सहमति" पाएका थिए, एक सिद्धान्त जसले बलात्कारको लागि पति-पत्नीको अभियोजन रोक्छ। यो सिद्धान्त अब धेरै देशहरूमा अप्रचलित मानिन्छ। पोर्न लत तथापि केही पुरुषहरूलाई चरम लम्बाइमा जानको लागि नेतृत्व गर्न यौन दुर्व्यवहारमा संलग्न हुन बाध्य पार्न सक्छ। हेर्नुहोस् यो कथा अष्ट्रेलियाबाट।
<< उमेरको सहमति अभ्यासमा के हो? >>